Pajala | Informationsverige.se
Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Anigu waxaan helay sharciga deganaanshaha / Deegaanka / Gobol iyo degmooyin / Norrbottens län / Pajala
Dib u cusboonaysiinti ugu dambeysay: 14 1 2021
Halkan waxaad ku haysataa fursada inaad ku noolaato nolol u dhow deegaanka dabiiciga ah, helitaanka tiro badan oo ah hawlaha wakhti firaaqaha ee dhinaca dhaqanka iyo isboortiga. Waxaanu leenahay iskool iyo dugsi xanaano aad u fiican. Lehna macalimiin waxbarasho sare haysata iyo fasalo yar.
8,051 kiilomitir oo laba jibaaran
Gällivare 146 kiilomitir
Rovaniemi 157 kiilomitir
Luleå 215 kiilomitir
Gudaha Pajala waxaa ku yaala dhulal banaan oo la iibsan karo gudaha degmadan. Lagana helo degmada iyo mulkiilayaal baraayfat ah labadaba. Qaar badan oo ka mid ah tuulooyinkayagana waxa laga helaa fursada ah in wax laga dhisto meel u dhow xeebta.
Gudaha degmadan waxaa laga helaa laba shirkado guryo oo waaweyn. Shirkada guryaha Pajala ee degmadu leedahay iyo ta baraayfatka ah ee Tornehem iyo guri kireeyayaal kale oo badan. Waxaa jirta xitaa fursada ah in la bar iibsado guryo ku yaala magaalada ugu muhiimsan.
Degmada Pajala waa degmo luuqadaha Fiinishka iyo Miyaankeli. Laakiin degmadan waa mid dhaqamo badan oo waxaa laga helaa turjubaano ah dhanka luuqado kala duwan marka loo baahdo turjubaan.
Magaaladan ugu muhiimsan waxaa ku yaala maqaaxiyo cunto, dukaano raashin iyo dukaamo kale. Halkan waxaa ku taala xitaa maktabad iyo Xafiiska Shaqada oo ku leh xafiis.
Dhowr ka mid ah tuulooyinkayagu waxay leeyihiin maktabad, dukaan raashin, fursada in shidaal lagu shubto baabuur iyo wakiilada farmasiga iyo dukaanka khamriga iibiya ee Systembolaget.
Laan Qayrta Cas waxay hawl ka fulisaa Kupan, taas oo ah dukaanka alaabta gacan labaadka ah, halkaas oo dharka, alaabta guryaha iyo maacuunta guriga intaba laga iibsado.
Degmada waxaa laga helaa dugsiyo xanaano oo degmadu leedahay kuna yaala tuulooyinkayaga. Waxaanu haynaa kooxo caruur oo yar oo banaanka ayaanu wax badan joognaa. Laga bilaabo da'da 5 sano waxay caruurtu bartaan inay dabaashaan.
Kaniisadu waxay qaban-qaabisaa dugsiga xanaanada ee furan, laba maalmood toddobaadkiiba.
Waxaanu leenahay dugsiyo hoose-dhexe oo ku yaala dhowr ka mid ah tuulooyinka iyo ilaa fasalka sagaalaad oo ku yaala lix ka mid ah tuulooyinkayaga ugu waaweyn. Waxaa jirta xitaa fursada ah in wax laga barto dugsiga sare ee ku yaala magaaladan ugu muhiimsan dhanka waxbarashooyin dhowr ah dhinaca maadiga iyo tababarka. Degmadan waxay wada shaqayn la leedahay Gällivare iyo Jokkmokk si loo balaariyo barnaamijyada la bixin karo.
Magaaladan ugu muhiimsan waxaa laga helaa SFI ku yaala Kunskapssmedjan. Halkaas ayaa xitaa laga baran karaa jaamicadda iyadoo qofku aanu joogin loona marayo xarunta waxbarida ee Lapplands lärcentra. Adigu waxaad baran kartaa dhowr dhinac oo ah xirfado kala duwan iyo jaamicad iyadoo qofku aanu joogin jaamicadda loona marayo xarunta waxbarida ee Lapplands lärcentra.
Lärcentrat waxay xitaa si dhow ula shaqaysaa qaybta ganacsiga si loo diyaariyo waxbarashooyin ku jiheysan xirfad oo ku aadan baahida suuqa shaqada.
Magaalada ugu muhiimsan waxaa ku taala Rug Caafimaad iyo rugta qaabilaada dhalinyarada. Iyo qaabilaada deg-degga iyo Daryeelka ilkaha ee dadweynaha. Dhowr ka mid ah tuulooyinkan waxaa jooga kalkaaliyayaasha caafimaad ee degmada.
Degmada kala xiriir 0978-120 00 haddii aad u baahato turjubaan.
Gudaha Pajala waxaa ku yaala garoonka diyaaradaha Pajala, lehna khadad maalinle ah oo u baxa Luleå. Toddobaad dhaaf kastana waxaa jirta fursada ah in loo duulo Tallinn. Guud ahaan waxaa jira xiriiryo fiican oo gaadiidka basaska ah.
Degmada Pajala waa shaqo-bixiyaha ugu weyn degmadan, waxaa ku xiga maamulka gobolka Norrbotten. Baahida xoog shaqaale dhanka daryeelka caafimaadka way weyntahay oo way ka sii badan doontaa intaas. Miyaad doonaysaa inaad socodsiiso shirkad? Pajala utveckling AB (PUAB) waxaa loogu talogalay inay caawiso adigaaga doonaya inaad bilowdo iyo marka aad socodsiiso shirkad.
Shaqooyinka ka banaan gudaha Pajala